December 2016 – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
guuleed	 Dec 31, 2016 0
Barnaamijka Dhuuxa oo habeenka sabtida marka laga tago habeenada kale ka baxa idaacada Alfurqaan waxaa Caawa lagu soo qaatay qodobo kala duwan ee kala deg linkiga hoose. Halkan Ka Dhageyso Dhuuxa 31 12 2016.
Dhagayso Warka Duhurnimo
Warka Duhurnimo ee Idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan waxaa lagu soo qaatay xaaladihii ugu dambeeyay dalka iyo dibadda. Halkaan Ka Dhageyso Warka Duhur 31 12 2016
Warka Subaxnimo waxaa saaka lagu soo qaatay qodobo kala duwan ee kala deg linkiga hoose. Halkan Kala Deg Warka Subax 31 12 2016 .
guuleed	 Dec 30, 2016 0
Barnaamijka Dhacdooyinka Dunida Islaamka waa barnaamij Todobaadle ah oo ka baxa warbaahinta Islaamiga ee Al-Furqaan, waxaana lagu soo gudbiyaa dhacdooyinkii todobaadkii lasoo dhaafay ka taagnaa caalamka Islaamka. Halkaan Ka Dhageyso…
Dhageyso:Diirada Jimcaha oo looga hadlay Qodob Muhiim ah.
Barnaamijka todobaadlaha ee Diirada Jimcaha ayaa maanta lagu soo qaatay horumar ganacsi oo ka jira wilaayada jubooyinka gaar ahaan Magaalada Saakow ee gobalka jubada dhexe. Ka qeybgalayaasha Diirada Jimcaha. 1-Maxamed Cabduqaadir…
guuleed	 Dec 29, 2016 0
Barnaamijka Dhuuxa oo habeenka sabtida marka laga tago habeenada kale ka baxa idaacada Alfurqaan waxaa Caawa lagu soo qaatay qodobo kala duwan ee kala deg linkiga hoose. Halkan Ka Dhageyso Dhuuxa wareysiyada 29 12 2016.
Warka Duhurnimo ee Idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan waxaa lagu soo qaatay xaaladihii ugu dambeeyay dalka iyo dibadda. Dhagayso warka duhur 29 12 2016
Warka Subaxnimo ee Idaacadda Islaamiga ah Al-Furqaan waxaa lagu soo gudbiyay dhacdooyinkii wararkii ugu dambeeyay iyo dalka. Halkan ka dhagayso War Subax 29 12 2016
Iyadoo maalma qur ah ay ka harsanyihiin kala wareega madaxweynaha Maraykanka Obama iyo Donalad Trump oo loo doortay hogaaminta Maraykanka ayaa waxaa muuqanaya khilfaad u dhexeeya labada madaxweyne. Donald Trump oo ku caan ah…
guuleed	 Dec 28, 2016 0
Barnaamijka Dhuuxa oo habeenka sabtida marka laga tago habeenada kale ka baxa idaacada Alfurqaan waxaa Caawa lagu soo qaatay qodobo kala duwan ee kala deg linkiga hoose. Halkaan Ka Dhageyso Dhuuxa Wareysiyada 28 12 2016